बाँकेमा इँटा उत्पादन घट्ने
नेपालगञ्ज । यस वर्ष बाँकेमा इँटा उत्पादनमा कमी आउने भएको छ । इँटा बनाउने सिजनमा बेमौसमी वर्षा हुँदा बनाएर राखिएका काँचो इँटा गलेर नष्ट भएपछि उत्पादन घट्ने भएको हो । बेमौसमी वर्षाले पकाउने तयारीमा राखिएका करोडौं मूल्यका इँटामा नोक्सान पु¥याएको नेपाल इँटा उद्योग व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष...
गाउँभरिको आम्दानीको स्रोत मौरीपालन
रूकुम । रूकुमको सिस्ने गाउँपालिका–३, पोखरा गाउँका अधिकांश स्थानीयको आम्दानीको स्रोत मौरीपालन बनेको छ । गाउँका १६७ घरमध्ये प्रायः सबैको घरमा मौरीपालन भएको पोखराका ओमप्रकाश खड्काले जानकारी दिए । विशेषगरी कात्तिके सिजनमा गाउँबाट मात्रै रू. ३० लाखको मह विक्री भएको उनले बताए । गाउँभरिका कृषको...
तिनाउ पुल १ दशकदेखि अलपत्र
रूपन्देही । पर्यटकीय स्थल लुम्बिनीसँग जोड्ने तिनाउ नदीको पुल ठेकेदारको लापरबाहीले १ दशकदेखि अलपत्र छ । रूपन्देहीको तिलोत्तमा–६, गोरकट्टामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको रहेको उक्त पुल निर्माणले झन्डै १ दशकदेखि गति लिन सकेको छैन । २०६७ असार २५ गते ठेक्का सम्झौता भई काम शुरू भएको पुल ९ वर्...
चौरजहारीमा लिफ्टिङ प्रणालीमार्फत खानेपानी
रुकुम । रुकुमको चौरजहारीमो लिफ्टिङ प्रविधिबाट खानेपानी पुर्‍याइने भएको छ । यसका लागि सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गरिनेछ । लामो समयदेखि खानेपानीको अभाव रहेको चौरजहारीमा उक्त प्रणालीमार्फत खानेपानी पुर्‍याउन लागिएको हो । चौरजहारी उपत्यकाका उपभोक्तालाई लक्षित गरी निर्माणाधीन विजयेश्वरी–चौरजहारी...
समाचार प्रभाव : अटो रिक्साको भाडा घट्यो
रूपन्देही (अस) । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका क्षेत्रमा चल्ने अटो रिक्साले भाडा घटाएका छन् । नेपाल स्वरोजगार टेम्पो रिक्सा एन्ड ट्याक्सी यातायात सेवा प्रालिले भाडादर घटाएको हो । हालै आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा अटो रिक्साको भाडा बढी भएको समाचार प्रकाशित भएको थियो । तिलोत्तमा नगरपालिका वड...
दाङका १३ स्थानमा पार्क निर्माण गरिँदै
तुलसीपुर । चालू आव २०७६/७७ मा दाङमा १३ स्थानमा पार्क निर्माण गरिने भएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पार्क निर्माण गर्न लागिएको डिभिजन वन कार्यालयले बताएको छ । सहायक वन अधिकृत संयोग बस्नेतका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिकामा ६, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा चार, दंगीशरण, बंगलाचुली र बबई नग...
नेपालगञ्ज । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकास्थित लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमीले सरकारसँग लिजमा लिएको १३ बिगाहा जमीन उपयोग नहुँदा गौचरणमा परिणत भएको छ । कलेजको भौतिक संरचना निर्माणका लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले प्रदान गरेको जमीन एकेडेमीको लापरबाही र उदासीनताले प्रयोगमा आउन सकेको छैन । २३ वर्षअघ...
देउराली लघुवित्तको सेवा शुरु, समृद्धिका लागि सुरक्षित लगानी हुनुपर्छ : गभर्नर नेपाल
माघ ११, रुपन्देही । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मुलुकको समृद्धिको लागि सुरक्षित लगानीमा जोड दिएका छन् । मुलुकको समृद्धिकालागि लगानी अपरिहार्य रहेको बताउँदै सुरक्षित कर्जा लगानी गर्न उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरे । प्रदेश ५को राजधानी बुटवलमा सञ्चालन गरिएको प्रदेश...
माघ १० परासी । थारू समुदायमा विशेष रुचाइने खाना हो, घुँगी । थारू समुदायको मौलिक खाना मानिने घुँगी र सिपुही अब थारू समुदायमा मात्र सीमित रहेन, घुँगी अहिले अन्य समुदायमा पनि लोकप्रिय हुन थालेको छ । घुँगीको लोकप्रियता बढेसँगै पछिल्लो समय पश्चिम नवलपरासीमा यसको माग बढ्न थालेको छ । माघीलगायतका विभिन्न...
माघ १०, नेपालगञ्ज । विपद् व्यवस्थापनका गर्न बाँके र बर्दिया जिल्लालाई लक्षित गरी नेपालगञ्ज विमानस्थलमा मानवीय सहायता कक्ष बिहीवारदेखि सञ्चालनमा छ । गृह सचिव प्रेमकुमार राईले सातओटै प्रदेश र सबै दुर्गम विमानस्थल रहेको ठाउँमा गरी १२ ओटा मानवीय सहायतास्थल निर्माण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । काठम...